Union Minister U Kyaw Tin attends Graduation Ceremony of the Certificate Course in Enhanced Diplomatic Skills (5/2019) – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin attends Graduation Ceremony of the Certificate Course in Enhanced Diplomatic Skills (5/2019)
The Graduation Ceremony of the Certificate Course in Enhanced Diplomatic Skills – EDS (5/2019), conducted by the Strategic Studies and Training Department of the Ministry of Foreign Affairs, was held at the Lawkanat Hall of the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw, at 03:00 pm yesterday, withaclosing address delivered by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar.
Present on the occasion were retired Directors-General, responsible officials of the departments under the Ministry, experts from other Ministries, instructors as well as trainees.
The eight weeks long course covered the subjects related to diplomacy, international relations, Labour Law, contemporary international affairs, economics and policies and some of these subjects were conducted in condition of simulated exercises. And it was attended by (50) trainees.
Ministry of Foreign Affairs is carrying out its duties in enhancing capacity of private and public sectors by conducting to provide up-to-date, emerging issues and the enhanced and basic diplomatic trainings. With this objective, the Certificate Course in Enhanced Diplomatic Skills (EDS) is conducted and targeted for graduates of the Certificate Course in Basic Diplomatic Skills (BDS).
အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
(၆-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်၊ ညနေ ၁၅၀ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လောကနတ်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ သင်တန်းနည်းပြ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီးများနှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သင်တန်းတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသော သံတမန်ရေးရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သံခင်းတမန်ခင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်၊ အလုပ်သမားဥပဒေ ဘာသာရပ်၊ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံတကာရေးရာများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များနှင့် မူဝါဒရေးရာစသည့် ဘာသာရပ်များကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချခဲ့ရာ သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တ (၈) ပါတ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၊ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၅၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကို ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်ပေးလျက် ရှိပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မြှင့်တင် ပေးလျက် ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (EDS) များကို အခြေခံ သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (BDS) တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးနောက် ဆက်လက်လေ့လာလိုသူများအတွက် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသော မျက်မှောက်ခေတ်ရေးရာများနှင့် သံတမန်ရေးရာ ဘာသာရပ်များကို ပို့ချပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် BDS သင်တန်းကို တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ် ကျင်းပပြီး EDS သင်တန်းကို တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ် ကျင်းပရန် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။